China Dodecyl Trimethyl Ammonium Chloride, CAS No. 112-00-5 mafuta1231 fekitari uye vagadziri | Kerui Makemikari
CAS Nhamba 112-00-5
Zita rekutengesa: 1231
Quaternary ammonium munyu 1231
Cationic quaternary ammonium munyu 1231
Dodecyl trimethyl ammonium chloride(1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) inoshandiswa seyemaindasitiri uye ekurima fungicides, pamwe neindasitiri yekurapa mvura fungicides.
Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) inoshandiswa seantistatic mumiriri yezvigadzirwa zvemicheka uye zvakare seinopomhodza uye antistatic mumiriri mumachira uye ezuva nezuva maindasitiri emakemikari.
Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) inogona kushandiswa seemulsifiers mune pigments, madhayi uye mamwe maindasitiri.
Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) inogona kushandiswa seemulsifier ine yakanyanya kupisa tembiricha yemvura mumafuta emulsion matope painochera matsime akadzika mumafuta emunda indasitiri, pamwe nekuburitsa mumiririri uye wekuzviparadzanisa mumiririri we emulsion indasitiri.
Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) inogona zvakare kushandiswa seyakakosha simbi inoburitsa yekuparadzanisa isingawanzo epasi zvinhu uye kupatsanurwa kweiyoobium, antimony uye chromium, nezvimwe; inogona zvakare kushandiswa sehemolytic mumiriri muropa sampuro yekuongorora;
Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) ine 98% yezvinyorwa zvemukati, kana zvichidikanwa, ndokumbirawo udane kuti uwane ruzivo.
Octadecyl trimethyl ammonium chloride (1231) ndiyo yakasvibirira yemakemikari synthesis yepakati, dzivisa kusangana neziso uye ganda, kana uchinge wasangana, uchiyerera nemvura.